COVID-19: Statistiques du 21 Septembre 2020 - ewa.mg
COVID-19: Statistiques du 21 Septembre 2020
News - Santé - COVID-19: Statistiques du 21 Septembre 2020
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Statistiques du 21 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.
Sur les 451 tests effectués ces dernières 24 heures, 20 personnes sont diagnostiquées positives au coronavirus a rapporté ce lundi 21 septembre la porte-parole du CCO. Ainsi, Madagascar compte actuellement 16073 contaminations depuis l’apparition de la pandémie de covid-19 dans le pays. Ces nouveaux cas ont été majoritairement localisés dans la région Analamanga avec un total de 12 cas. Le reste est réparti comme suit: 4 cas à Vakinankaratra, 1 cas à Itasy, 1 cas à Alaotra Mangoro, 1 cas à Matsiatra Ambony et 1 cas à Boeny. Ce jour, 36 patients ont recouvré la santé portant à 14682 le nombre total de guérisons dans tout le territoire malagasy. Par ailleurs, 1164 malades sont encore en traitement, dont 20 dans un état critique. Deux nouveaux décès ont été communiqués. Désormais, le nombre officiel des victimes s’élève à 225.
L’article COVID-19: Statistiques du 21 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Mampivoatra ny any ambanivohitra ny WeLight
Miezaka mampivoatra ny famatsiana herinaratra any ambanivohitra ny orinasa WeLight Madagascar, araka ny tontolo manodidina mampiavaka an’ilay tanàna. Jerena avokoa, ohatra, ao amin’ny tanàna iray ny isan’ny mponina, ny tsy fahazoan’izy ireo herinaratra, sy ny tetibola ankapobeny isam-pianakaviana.Atao maharitra ny fotodrafitrasa apetraka, indrindra any amin’ireo kaominina ambanivohitra lavitra sady ratsy lalana. Miainga avy amin’izany ny famolavolan’ny WeLight ny vidin’ny angovo, araka izay zakan’ny isam-pianakaviana, ka aloa mialoha ny vidin’ny herinaratra amin’ny alalan’ny « compteur prépayés ». Maherin’ny tokontrano 600 sy asa fihariana maro, toy ny asa tanana, fanodinam-bokatra avy amin’ny fambolena no mahazo tombontsoa amin’izao tetikasa izao. Manohana sehatra maro ny WeLight, ankoatra ny fihariana, eo indrindra koa ny fanampiana ny fampianarana, ny fitsaboana. Ireo mpiara-miombon’antokaPatmad : Fikambanana najoro araka ny lalàna malagasy, manana toeram-piasana Tsiky eto an-dRenivohitra sy fanahazana voankazo any Ampefy. Manolotra vahaolana ho fanavaozana nanomboka ny 2004, ho fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana any ambanivohitra . Ireo mpiasa ao amin‘ny Tsiky, ohatra, nomena fiofanana sy nampian’ny manam-pahaizana Suisse avy ao amin’ny CEAS, momba ny fanamboarana milina manodina herinaratra avy amin’ny rano. I Dama ao amin’ny tarika Mahaleo no mitarika azy.CEAS : ONG Suisse miasa eto Madagasikara nanomboka ny taona 1982. Manampy betsaka amin’ny fanodinam-bokatra avy amin’ny fambolena sy ny famokarana herinaratra azo havaozina izy izao.Aider : Fikambanan’ny injeniera miasa ho amin’ny fitrandrahana angovo azo havaozina avy amin’ny rano, nanomboka ny taona 2004. Anaran’ny foibe famokarana : AndriamamovokaToerana : Fialofa, Sarobaratra – Miarinarivo Itasy,22 km avy eo AnalavoryIsan’ny mponina : 2797 , tokantrano 642Herin’ny angovo : 2 x 50 KW (100 KW)Azon’ny tokantrano alaina : 12 V, 220 V, 400 VL’article Mampivoatra ny any ambanivohitra ny WeLight a été récupéré chez Newsmada.
Toamasina II : Jiolahy telo matin’ny zandary, dimy azo sambom-belona
Izy dimilahy voasambotry ny zandary Ny alin’ny 13 aogositra teo nifoha ny alakamisy 14 aogositra, dia raikitra ny fifampitifirana sy ny fifanenjehana teo amin’ireto andian-jiolahy sy ny zandary. Nanomboka teo Ivoloina izany hatrany amin’ny kaominina Ambodimandresy sy Sahandahatra ary hatrany Ampasimbe Toamasina II iny. Raha ny fanazavana azo, dia tena tamba-jotran-jiolahy izy ireo, satria dia miisa valo tany ho any ireo nanao izany ary avy any Fenerivo atsinanana izy ireo no manao asan-jiolahiny amin’ny lalam-pirenena faha-05 iny. Efa roa andro no tsy nandry fahalemana ireo Tanana sy kaominina amin’ny lalam-pirenena faha-05 iny, ka izao nanaovan’ny zandary hetsika manokana izao, noho ny vaovao azon’izy ireo ara-potoana. Manapoaka basy sy mampitahotra ireo tokantrano tafihany hatrany ireto jiolahy ireto mandritra izany. Raha tao amina tokantrano iray tao Sahandahatra izy ireo nanao izany, dia voatery namaly tifitra koa ilay tokantrano notafihan’izy ireo; nony farany tsy namelan’ireto jiolahy ireto raha tsy maty ilay raim-pianakaviana nifamaly tifitra tamin’izy ireo ; izay mpandraharaha ara-barotra any an-toerana. Taorian’izay dia nahazo vaovao avy tamin’ny fokonolona ny zandary fa misy lehilahy iray mampiahiahy azy ireo tao Antsiranambe mihazo an’i Basindrano. Nanao vela-pandrika ny zandary ka voasambotra tamin’izany Rakotoniaina Johnny 32 taona, avy any Sahavola Fenerivo atsinanana. Raha nojerena ny finday teny aminy dia teo no nanomboka ny fisamborana ireo namany, ka voasambotra teo amin’ny fiantsonan’ny taksibrosy mihazo an’i Fenerivo atsinanana i Kika Gidore 28 taona, avy ao Mangarivotra Fenerivo atsinanana. Ireo tratra ireo no nanoro ny namany taorian’izany. Nisy ny fikarohana ireo namany izay mbola niafina tany anaty ala ka vokatry ny fifamaliana tamin’ny tifitra dia matin’ny zandary tamin’izany ny jiolahy telo fa voasambotra kosa i Serge 35 taona avy ao Ambodiazinina Fenerivo atsinanana, i Jean de Dieu Félicien avy ao Ambodimozinga Sahandahatra izay zanatany ao Toamasina II mpitari-dalana azy ireo, ary i Toto François 24 taona izay, avy eto Toamasina renivohitra. Raha ny vaovao dia eo am-pikarohana ny namany hafa ny zandary amin’izao. Malala DidierL’article Toamasina II : Jiolahy telo matin’ny zandary, dimy azo sambom-belona a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Minisitry ny Fitsarana, Randrianasolo Jacques: « Miova ny fomba fiasa…Tsy azo ekena ny tsimatimanota »
“Tokony hiova ny fomba fiasa ary ho mailaka sy madio. Tsy tokony hanjaka intsony ny tsimatimanota. Hamondrona ny hery rehetra hamongorana ireny fanetriben’ny firenena ireny isika”, hoy ny minisitry ny Fitsarana, Randrianasolo Jacques , ny alatsinainy teo. Nitokana ny lapan’ny Fitsarana ambaratonga voalohany ao Morombe, faritra Atsimo Andrefana ny minisitra tamin’io fotoana io. Nambarany fa tsy maintsy manao ny ezaka rehetra ny tsirairay hialana amin’ny fomba ratsy maha voasokajy ny fitsarana ho anisan’ny lohalaharana amin’ny fanaovana kolikoly. Nitondra ny teny fankasitrahana ho an’ny Pnud ny minisitra ary nanentana ny mpiara-miasa rehetra mba hihavao toy ny fotodrafitrasa vao notokanana.Fiaraha-miasa amin’ny PnudNampitandrina ny tenany nandritra izany ny amin’ny tokony hitandrovana fatratra izao fananana iombonana izao. Tsiahivina fa simban’ny rivo-doza taona vitsy lasa ity fotodrafitrasa ity, ka nitondra ny fanavaozana tamin’ny alalan’ny fiaraha-miasa ny eo anivon’ny Pnud. Nohararaotin’ny minisitry ny Fitsarana koa izao diany izao, nitsidihana ny fonja tany an-toerana, ka nitafany mivantana tamin’ireo mpandraharaha ny fonja any Morombe.Anisan’ny niatrika izany ireo tompon’andraikitry ny Fitsarana isan-tsokajiny aty amin’ny faritra Atsimo Andrefana sy ireo tompon’andraiki-panjakana voafidy sy voatendry any an-toerana.Synèse R. L’article Minisitry ny Fitsarana, Randrianasolo Jacques: « Miova ny fomba fiasa…Tsy azo ekena ny tsimatimanota » a été récupéré chez Newsmada.
Tanandava: tratra ireo jiolahy nanafika ny fiaran’Ambatovy
Hatolotra ny fitsarana aorian’ny famotorana ireo jiolahy efatra tompon’antoka tamin’ny fanafihana ny fiara 4×4 an’ny orinasa Ambatovy ao Toamasina, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary ao amin’ny vondron-tobim-pileovana Atsinanana. Nohamafisin’ny zandary hatrany fa nitondra “agent de securité” ity fiara ity no nifanehatra tamin’ny jiolahy tao Tanandava Toamasina, afakomaly. Nobahanan’ireo olona tamin’ny vatobe sy vatan-kazo ny lalana ka rehefa nijanona ny fiara dia notsenain’ireo jiolahy tamin’ny tora-bato sy pilotra. Vokany, naratra mafy ilay mpamily, raha ny tatitra nampitain’ny zandary hatrany. Tsy nisy fananana voaroba kosa na aina nafoy nandritra ity fanakanan-dalana niharo fanafihana ity. Nahazo loharanom-baovao avy hatrany ny zandary momba ny fisian’ireto andian-jiolahy mpanakan-dalana ireto ka nametraka ny vela-pandrika avy hatrany. Vokany, noraisim-potsiny ireo jiolahy mpanafika. Niaiky ny heloka vitany ry zalahy nandritra ny famotorana nataon’ny zandary.J.CL’article Tanandava: tratra ireo jiolahy nanafika ny fiaran’Ambatovy a été récupéré chez Newsmada.
Hetsika efatra miantoana: hanatanteraka « Metalygasy » ry Kazar sy ry Märtz
Taona maromaro tsy hita teny an-tsehatra teto Madagasikara. Ho setrin’izay, ao anatin’ny iray volana, ho tazana tsy tapaka amin’izay ny tarika Kazar sy ny tarika Märtz. Ho afaka hianoka misimisy kokoa ny mozika rock sy ny metaly indray ny rehetra…Noho ny antony maro samihafa, tsy tazana niaka-tsehatra firy teto Madagasikara loatra ny tarika Kazar. Fantatra, omaly tetsy amin’ny Carlton, fa ho avy i Milon, iray amin’ireo mpikambana ao anatin’izany tarika manana ny maha izy azy eo amin’ny tontolon’ny rock sy ny metaly izany. Hanatanteraka hetsika nampitondraina ny lohateny « Metalygasy » izy ireo (tarika Kazar) sy ny tarika Märtz, raha ny fampahafantarana nataon-dRajaofetra Andrianaina Sandy avy ao amin’ny Sandix, trano mpamokatra mikarakara ity hetsika ity.Ny 18 aogositra izao, manomboka amin’ny 2 ora tolakandro, ao amin’ny AFT Andavamamba, ny fampisehoana miaraka amin’ny Kazar sy ny tarika Märtz. Ny 23 aogositra manomboka amin’ny 2 ora tolakandro, eny amin’ny ADMC-Craam, oniversiten’Antananarivo, fihaonana sy velakevitra nampitondraina ny lohahevitra “Aiza ho aiza ny tsenan’ny metaly sy ny rock eto Madagasikara”. Nanasana ireo manana traikefa amin’izany toa an’i Dina Randrianoelison (Team Distortion), i Eric Rasoamiaramanana (Libertalia Music), i Mahalia (Loharano), i Abasse Djiva (tarika Apost), i Elia Ravelomanantsoa (minisitra teo aloha ny Kolontsaina), sns. Hialohavan’ny fandefasana horonantsary « Kazar : Malagasy Rock legende », novokarin’i Tsilavina Ralaindimby, ity velakevitra ity. Ny 24 aogositra, manomboka amin’ny 8 ora sy sasany alina, ao amin’ny Kudeta Carlton Anosy, « Milon Kazar en cabaret acoustic and electric ». Fotoana hitendren’i Milon ny karazan-gadona sy ny hira tahaka ny metaly, ny latino, ny hira malagasy, sns. Faranana eny amin’ny Is’Art Galerie Ampasanimalo ny « Metalygasy », ny 30 aogositra manomboka amin’ny 8 ora sy sasany alina, amin’ny alalan’ilay seho hiarahana amin’ny tarika Kazar.Raha tsiahivina, 33 taona lasa ny efa niforona ny tarika Kazar raha ny taona 1989 kosa ny nijoroan’ny Märtz.HaRy Razafindrakoto L’article Hetsika efatra miantoana: hanatanteraka « Metalygasy » ry Kazar sy ry Märtz a été récupéré chez Newsmada.
47 taona ny 13 mey 72: tadiavina hatrany ny fahamarinan-toerana politika
Mandeha ny fotoana. 13 mey 1972-13 mey 2019: 47 taona katroka, anio, ny hetsi-bahoaka teny amin’ny kianjan’ny 13 mey 1972. Tsaroana isan-taona izay; eny, na efa tsy firy aza ny hetsika manokana ny amin’izany. Tamin’io hetsi-bahoaka io no hoe nanombohan’ny fiverimberenan’ny krizy politika lehibe eto Madagasikara. Teo ny tamin’ny taona 1972, 1991, 2001, 2009, 2019.Tsy hiverenana intsony ny tantara tamin’izay nitranga sy niainan’ny firenena tamin’ny “Raharaha 1972”, tsiahivina saika isan-taona: fitakian’ny mpianatra, lasa hetsi-bahoakaNy tsy aritra amin’izao tsingerin’andro izao, toa zava-tsy inona akory no mahatonga ny krizy politika. Saika miafara amin’ny fialan’ny fitondram-panjakana hatrany izany, na fiovan’ny Repobika mihitsy aza.Anton-javatra efa niotrika ela no mampipoaka ny hetsi-bahoaka? Na noho ny tsy fitandreman’ny mpitondra: tsy fihenoana ny hetaheta sy ny fitarainan’ny vahoaka, na tsy famelana ny vahoaka hiteny sy hihetsika. Eo koa ny hoe miafara amin’ny fitakiana ny fialan’ny fitondrana hatrany ny hetsika rehefa mitambatra sy ela, na toa zava-tsy inona akory aza no niandohany.Tsy nitsaha-nikororosy fahana ny firenena Taorian’ny “Raharaha 1972”, tsy nitsaha-nikororosy fahafana ny fiainam-bahoaka sy ny firenena. Na teo amin’ny lafiny politika izany, na toekarena, na sosialy, na kolontsaina… Nahoana? Misy mahita fa noho ny krizy politika miverimberina no hoe antony. Ao ny milaza fa noho ny afitsoky mpitondra no nahatonga ny fahantram-bahoaka, mampipoaka ny krizy politika isaky ny mihetsika.Taorian’ny Tetezamita 1972-1975, nidirana tamin’ny Repoblika II, ohatra, no nampirongatra ny politika ho famitaham-bahoaka, fitadiavan-tseza, nanomezana vahana ny lafiny foko, fangoronan-karena… Niara-dalana tamin’izany ny fahantram-bahoaka sy ny fampandrosoana tsy hita be ihany. Tafajabaka amin’izay ihany koa ny vahiny manana sy miady ary miaro ny tombontsoany manokana?Hatramin’ny krizy politika farany teo, nisian’ny hetsi-bahoaka teny amin’ny kianjan’ny 13 mey, avrily 2018: tsy mbola mahafa-bela ny fiverimberenan’izany. Mandra-pahoviana? Na mba hahay haka lesona amin’izay ny rehetra, raha tsaroana isan-taona toy izao ny tantara. Mba tena azo antoka amin’izay ve ny hoe fahamarinan-toerana politika hisian’ny tena fampandrosoana maharitra?R.Nd. Tsy azo atao ny kabary politika “Satria fotoam-pahatsiarovana tsy azo vonoina eo amin’ny tantaran’i Madagasikara ny datin’ny 13 mey 1972, mahazo manao fangatahana avokoa izay te hametraka fehezam-boninkazo eny amin’ny kianjan’ny 13 mey”, hoy ny préfet de Police, ny jeneraly Ravelonarivo Angelo, ny amin’izany. Roa ihany ny fangatahana voarain’ny prefetiora ny amin’izay fametrahana fehezam-boninkazo izay.Misy fitsipika arahina amin’izany. Misy mpitandro filaminana eny an-toerana, mandamina ny fidiran’ny olona amin’ny fametrahana fehezam-boninkazo. Fepetra ny tsy fahazoana manao kabary politika, saingy azo atao ny miresaka amin’ny mpanao gazety. L’article 47 taona ny 13 mey 72: tadiavina hatrany ny fahamarinan-toerana politika a été récupéré chez Newsmada.
Fikambanana CDL: manabe sy manomana ankizy
Nijoro ara-dalàna ny volana desambra 2016 ny « Association Clair de Lune Madagascar » na CDL, fikambanana tsy mitady tombony amin’izay ataony. Tanjona ny hampivelarana ny maha olona, fanatsarana ny fari-piainana, fanomezana hasina sy tsy fanilihana ao anatin’ny fiarahamonina, fampandraisana anjara amin’ny toekarena hiadiana amin’ny fahantrana ao anatin’ny fampandrosoana maharitra.50 eo ho eo ny ao amin’ny CDL mpikambana milatsaka an-tsitrapo, samy amin’ny fahaizany avokoa, mivondrona manampy, mampianatra, manorina. Misy ireo mpikambana avy amin’ny fanjakana, sehatra tsy miankina, ary mbola mpianatra. Iarahan’izy ireo mjery izay vahaolana maharitra manoloana ny tsy fitoviana mibaribary eo amin’ny fiarahamonina.Betsaka ireo sehatra itondran’ny CDL ny fanampiany, indrindra ny fanabeazana, ny vehivavy sy ny tanora, ny tontolo iainana. Namaritan’ny fikambanana tetikasa avokoa ireo, fa amin’izao ankatoky ny fetim-pirenena izao, mizara hafaliana izy ireo ho an’ny ankizy mpianatra 110 ao amin’ny EPP Antsahamasina, anio 22 jona. Anatin’ny fandaharam-potoana ny fanomanana ireo ankizy ho an’ny hoaviny, fizarana boky fanabeazana sy harendrina “vita malagasy”, fiaraha-misakafo “Asaramanitra”.Fahaiza-miaina, tontolo iainana, kolontsainaFanintelony ny CDL ny manao toy izao rehefa tonga ny fetim-pirenena : tany Ambohitrarahaba ny voalohany, taona 2017, ankoatra ny harendrina sy ny sakafo “Asaramanitra”, nentanina amin’ny fahaiza-miaina, fiarovana ny tontolo iainana, nizarana akanjo sy kilalao ireo ankizy avy amin’ny fianakaviana sahirana. Ny taona 2018, tany amin’ny EPP Miandrarivo Mahitsy, fampahafantarana ny tantara sy ny kolontsaina malagasy, fanabeazana amin’ny fanadiovana ny ativava sy nify. Faha-27 izao ataon’ny CDL izao amin’ny tetikasany nofaritany rehetra. Nanampy ny fikambanana ny vondrona orinasa samihafa miampy ireo mpikambana sy olon-tsotra.Raha ny fanabeazana manokana, misongadina ny fiantohan’ireo miara-miombon’antoka amin’ny fikambanana ny fianaran’ireo ankizy avy amin’ny fianakaviana sahirana. Notsidihan’izy ireo tamin’ny volana mey teo ny foibe AI2M Ambohibao misy ireo ankizy iantohana taom-pianarana 2018-2019. Omen-danja ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana, fanohanana tanora vavy hahay hihoitra amin’ny fiainana. R.Mathieu L’article Fikambanana CDL: manabe sy manomana ankizy a été récupéré chez Newsmada.
Lalam-pirenena – RN2: mila fandaminana ny eo Marozevo
Sahirana ireo mpitondra fiara rehefa handalo ny tanànan’i Marozevo, tanàna eo am-pototry ny fiakaran’i Mandraka iny. Mandalo eo avokoa na ireo fiara mitondra entana tonga avy ao Toamasina na ireo mitatitra entana haondrana ao amin’io seranana io avy aty Antananarivo sy avy any Alaotra, ny kraoma, ohatra. Miampy izany ireo mpitatitra olona sy fiaran’olon-tsotra.Toerana fisakafoan’ny maro ny eo Marozevo. Isan’ireny ireo fiara goavana sy lavabe. Maro ireo fiara miantsona eo ka zary ampahan-dalana kely sisa azon’ny fiara aleha. Lavabe ny filaharan’izay mijanona eo ka tsy tazan’ny mpamily avy amin’ny ilany iray ny fidiran’ny fiara avy any amin’ny ilany faharoa. Tafiditra ao afovoany vao mifankahita. Tsy afaka mihemotra, satria fiara maro no efa manaraka aoriana.Mandany fotoana, tonga hatamin’ny fifamaliana.”Tsy antoandro, tsy alina, ary samy manao beloha!”, hoy ny mpitondra fiara. Misy tobin’ny zandary tsy lavitra eo ka heverina fa tokony hisy ny fandaminana. Rarivo L’article Lalam-pirenena – RN2: mila fandaminana ny eo Marozevo a été récupéré chez Newsmada.
Niroso tamin’ny fitsarana an’ireo taratasim-panadinana bakalôrea ny mpitsara, nanomboka omaly tolakandro. Tamin’ ny alakamisy lasa teo no nifarana ny adina an-tsoratra ho an’ny fanadinana bakalôrea ankapobeny raha mbola mitohy kosa ny adina ho an’ireo mpianatra miatrika ny sokajy teknika. Tombanana hivoaka, amin’ny tapaky ny volana novambra any ho any, ny voka-panadinana. “Efa manomboka ny fitsarana an’ireo taratasim-panadinana ho an’ny bakalôrea ankapobeny. Ho vita amin’ ny herinandron’ny 2 novambra ho avy izao ny fitsarana rehetra. Any amin’ny herinandron’ny 16 novambra any kosa no hivoaka ny voka-panadinana”, hoy ny nambaran’ny tompon’ andraikitry ny fanadinana. Tsy mbola manana ambara mikasika ny naotin’ireo mpiadina kosa ireo mpitsara noho izy ireo vao manomboka ny fitsarana. Nizotra am-pilaminana kosa, tamin’ny ankapobeny, ny andiany faharoa amin’ny bakalôrea teknika, omaly. Hifantoka amin’ireo taranja natokana ho azy ireo ny mpiadina, amin’ity herinandro ity. Nanao fidinana ifotony teny amin’ny lisea teknika Ampasampito sy teny Mahamasina ny minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, Assoumacou Elia Béatrice, omaly. Mafy ny fanaraha-maso ny fizotran’ny fanadinana manerana ny Nosy. Omaly ihany dia efa nosantarina ny fitsarana ny taratasim-panadinan’ireo mpiadina. L’article Bakalorea :: Hivoaka raha afaka telo herinandro ny voka-panadinana est apparu en premier sur AoRaha.
Ankoatra ny maha valanaretina azy, mari-pandrefesana zavatra maro ny Coronavirus. Nandrefesana ny fahalalana, ny fahaizana, ny finoana, sns, ananan’ny tsirairay sy misy eo amin’ny firenen-tsamihafa. Fa anisan’ny goavana natsinkafon’ity valanaretina ity, ny nahenoina fa misy amin’ny Malagasy no tsy manana tanin-drazana ka tsy afaka niala ny toerana misy azy na mba te handositra ny covid-19 aza.Raha adika tsotsotra, misy amin’ny Malagasy no tsy manana ambanivohitra, toerana nipoirana, tany navelan’ny razana, tranon-drazana, sns. Sanatria, mety tsy hanana fasan-drazana ihany koa aza angamba ! Misy ny tratry ny tsy fidiny no tsy nananany tanin-drazana fa ny an’ny hafa mba ahoana ? Tao ireo nivarotra, misy ny zara fa manao tsidi-pahitra ka tsy fantatr’olona any an-toerana intsony ny fisiany, tsy vitsy koa ireo tsy miraharaha tsotra izao ny toerana nipoiran’ny razany.Efa ampy hamantarana ny zava-manjo sy mihatra amin’ny Malagasy sy ny kolontsainy ireo. Tokony hifanaraka amin’izay ihany koa ny vahaolana raha toa ka heverina fa olana ny Malagasy tsy manana tanin-drazana. Sa ve efa mizotra amin’ny lalan’ny « fandrosoana » izao ka tsy misy ilàna izay kolontsaina ?HaRy RazafindrakotoL’article Maro ny kolontsaina very: mari-pandrefesan-javatra maro ny Coronavirus a été récupéré chez Newsmada.
Fandalovana eto Madagasikara :: Hitety faritra maro ilay mpihira ny “Jerusalema”
Raikitra fa handalo eto Madagasikara, amin’ny 14 – 22 novambra izao ilay mpanakanto avy atsy Afrika Atsimo, Nomcebo, fantatra amin’ilay hira nalaza tao anatin’ny fihibohana “Jerusalema”. Hiatrika fitetezam-paritra, hanomboka any Sambava handalo an’i Toamasina sy Mahajanga ary hifarana eto Antananarivo, ity mpanakanto vahiny ity, amin’ izao fitsidihany an’i Madagasikara izao, araka ny nambaran’i Bryan, avy ao amin’ny Malagasy MusicEvent mpikarakara hetsika any Eoropa. Hiara-hisalahy amin’izy ireo amin’izany ny Mick Prod’Zik. « Madagasikara, toy ny firenena maro maneran-tany, ka niatrika ny fihibohana. Sahirana ny saina ary tao anatin’izany no nipoiran’ilay hira Jerusalem. Na ny mpianakavy, na ny mpinamana, eny hatramin-dry bebe sy dadabe ary ireo kilonga aza samy faly, nianatra ary niezaka nandihy an’ilay hira avokoa », hoy ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny fikambanana mikarakara an’ity seho ity nanazava ny anton’ny safidy. Hira maro Manana hira maro ity mpanakanto ity, ankoatra an’ilay “Jerusalema”, ka afaka hahazaka sehatra tsara. Na izany aza, hizara sehatra amina mpanakanto malagasy maro izy ka isan’izany ry Black Nadia, Nael, Mad Max, Jerry Marcoss, Tence Mena sy ny maro hafa. Hanomboka ny seho any Sambava, amin’ny 14 novambra, i Nomcebo. Any Toamasina (15 novambra) sy Mahajanga (21 novambra) kosa ny tohiny. Hiakatra etsy amin’ny Coliseum Antsonjombe indray izy amin’ny 22 novambra, araka ny fandaharam-potoana nofaritan’ny mpikarakara. Mialoha ny hiampitany eto Madagasikara dia hanolotra seho iray any Burkina Faso ity, mpanakanto Afrikana Tatsimo ity amin’ ny 31 oktobra ho avy izao. Hifindra lasy atsy amin’ny nosy Maorisy kosa ny vehivavy amin’ ny 13 – 14 febroary 2021. Hetsika karakarain’ny Malagasy MusicEvent hatrany ireo rehetra ireo, araka ny fanazavana. Misy lalao maro efa miparitaka any anatin’ny tambajotran-tserasera sosialy Facebook hahafahan’ireo mpankafy misitraka fanomezana maro manomboka amin’ny tapakila hijerena ny seho ka hatramin’ny lelavola roa tapitrisa ariary. L’article Fandalovana eto Madagasikara :: Hitety faritra maro ilay mpihira ny “Jerusalema” est apparu en premier sur AoRaha.
Indraimbava: aza atao takalonaina ny vahoaka
Tsy hiverina hivory ireo loholona… Antony naroson’izy ireo ny tsy fisian’ny tetibola hampiakarana ireo loholona eto an-dRenivohitra. Tapaka mantsy ny bolongam-bola hatokana ho fampandehanan-draharaha ao amin’ity andrimpanjakana mpanao lalàna ity. Ny antony manaraka, izay iaraha-mahalala na tsy ambara mivantana aza, ny fanehoana ny tsy fankasitrahana ny fifidianana loholona ho avy. Hitarika mankany amin’ny fialan’ireo loholona am-perinasa mantsy izany, mazava loatra. Amin’ny maha loholona azy ireo, olon-dehibe manam-pahendrena sady manam-pahaizana avokoa izy ireo. Heverina fa tsy izy ireo no tokony hanaotao foana amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra. Toa tsy izany anefa ny andraisan’ny mpanara-baovao ny zava-misy. Toa mahatsapa ny rehetra fa manao takalonaina ny vahoaka ireo loholona. Anisan’ny lahadiniky ny fivorian’ny Antenimiera roa tonta amin’izao fotoana izao mantsy ny fandaniana ny tetibolam-panjakana ho an’ny taona 2021. Raha tsy lany izany, tsy misy asa afaka mandeha eo. Ny loholona, efa fantapantatra ihany ny hataony. Fa mandiso fanantenana ny maro koa ny fahenoana ny fitakiana nataon’ireo solombavambahoaka. Ny mahakasika azy ireo aloha no tena nojereny voalohany! Ny fiara tsy mataho-dalana isaky ny solombavambahoaka sy ny fisotroan-dronono ho azy ireo no nahamaika azy. Tsy hoe tsy ilaina akory, saingy mba azo nafenimpenina tany amin’ny faramparany izany fitkakiana izany. Dia raha tsy hivaly ve ny fitakiana, mety hiray loha amin’ireo loholona koa ny solombavambahoaka? Fantatr’izy ireo tsara fa takin’ny lalàna ny fivezivezen’ny volavolan-dalàna eo amin’ireo Antenimera roa tonta. Izany hoe, eo am-pelatanan’izy ireo ny tohin’ny tantara. Tsy miandrandra zavatra maro, afa-tsy ny hanaovan’ireo parlemantera ny asany araka ny hitsiny ny vahoaka. Mba tsy ho nenina ho azy ireo ny safidiny. Mba tsy hahatsiaro ho takalonaina hatrany isaky ny misy kajikajy politika miainga ao…Randria.L’article Indraimbava: aza atao takalonaina ny vahoaka a été récupéré chez Newsmada.